Lalàn'ny fianakaviana | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Lalàna momba ny fianakaviana
Inona avy ireo andraikitr'ireo mpitsabo mpanampy tanora mifandraika amin'ny zatovo voarakitra?
Inona no andraikitry ny mpanara-maso ny raharahan'ny zaza tsy ampy taona mifandraika amin'ny zatovo voasoratra anarana? Amin'ny fiainana dia hita fa ny ray aman-dreny ihany no voakapoka. Ary miresaka sy manoratra minitra. Voafehy ny asan'ny inspektera ...
Ahoana ny hamantarana ny tsy mety
Ny fomba hanambarana hoe "Ny fomba fanao" tsy mahay dia lava be. 1. Mandehana amin'ny fitsarana. 2. Fanadinana aretin-tsaina (marary na marary) 3. Fanapahan-kevitra amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana (fanekena ho tsy mahavita na tsy mety milaza fa tsy afa-manoatra) Amin'ny ankapobeny ...
Ahoana no hanoratanao fitarainana momba ny alimony?
Ahoana ny fomba fanoratana fanambarana fitakiana alimony. Ny endrika sy ny takiana amin'ny fanambarana ny fangatahana dia omena amin'ny And. 131 amin'ny fehezan-dalàna momba ny fomba sivily an'ny Federasiona Rosiana; Mila manondro ianao: 1) ny anaran'ny fitsarana izay anaovana ny fangatahana; ...
Ahoana no ahafantarana raha manambady ny olona iray sa tsia?
Ahoana no ahalalanao raha manambady ny olona iray na tsia? latabatra fampahalalana tokana - TSIA, fa mendrika ny mandeha any amin'ny birao fisoratana anarana akaiky indrindra miaraka amin'ny pasipaoro - hiantso anao izy ireo ary hilaza aminao ...
fanohanan'ny ankizy tsy misy fisarahana
Vao nametraka ny fanohanan'ny zaza aho nefa tsy nisara-panambadiana, fa raha tsy misy ady hevitra momba ny toerana onenan'ilay zaza dia eo anilan'ny fitsarana ianao 1. Tsy misy mandrara anao hanao rakitra ...
Ahoana ny fametrahana olona marary saina ao amin'ny hopitaly?
ahoana ny fametrahana olona marary saina ao amin'ny hopitaly? 1. na amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana 2. na amin'ny alalany manokana. Mifanaraka amin'ny Lalànan'ny Federasiona Rosiana "Momba ny fikarakarana ara-tsaina sy fiantohana ny zon'ny olom-pirenena ao ...
Fizarana 1 Art. 157 UK RF Fanosorana ny alimony ratsy.
Fizarana 1 amin'ny andininy 157 amin'ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava ao amin'ny federasiona rosiana fanalavirana ny fitiavam-bola. Afaka 10-15 taona angamba ny zanakao dia handeha haka asa malaza any amin'ny andrim-panjakana malaza, ary mandritra ny fizahana manokana dia hita fa notsaraina ilay raim-pianakaviana .. ...
Inona ny UFK?
Inona ny UFC? Ity dia spice Federal Treasury (Treasury of Russia) rafitra mpanatanteraka federaly (serivisy federaly), izay, arakaraka ny lalàna mifehy ny Federasiona Rosiana, dia manatanteraka ny fampiharana ny lalàna mba hiantohana ny fanatanterahana ny tetibola federaly, vola ...
Lazao ahy, amin'ny toe-javatra manao ahoana no mety hitera-drain'ny ankizy iray amin'ny reny mandritra ny fisaraham-panambadiana?
Lazao amiko, amin'ny fepetra manao ahoana no ahafahan'ny ray mitory ilay zaza amin'ny reniny raha misy fisaraham-panambadiana? Raha tsara kokoa ny toerany raha ny hevitry ny fitsarana. Subjectif be ny zava-drehetra !!! Amin'ny fampiharana, mitombo be ny vintana raha avy hatrany maka ...
Ny alim-pianakaviana dia nesorina amin'ny karama feno na efa misy hetra?
Esorina ve ny alimony amin'ny karama feno sa efa misy haba? Ary nesorina tamin'ny valisoa koa ny alimony? Ohatra, ny karama 15, izay ahena 000% ny alimony. Ary avy eo vao isaina ny hetra ...
Araky ny lahatsoratra 69 an'ny IC IC, azonao atao ny manaisotra ny maha-ray aman-dreny any amin'ny fitsarana, ary inona ny antontan-taratasy ilaina?
Amin'ny alàlan'ny Andininy 69 an'ny RF IC dia azo atao ny manaisotra ny paternity any amin'ny fitsarana, fa inona ny antontan-taratasy ilaina? Taratasy nahaterahana, pasipaoro ary antontan-taratasy manaporofo ny fitakianao. Andininy 69. Fahakiviana ...
manampy azafady! Ahoana no hanoratana ny filazan'ny ray aman-drenin'ny zaza atsy amin'ny toeram-pambolena.
mba ampio aho azafady! Ahoana ny fomba fanoratana famaritana ny ray aman-drenin'ny zaza manatrika akaninjaza. "Characteristic" no teny tenany (voasoratra eo afovoan'ny takelaka) Eo amin'ny zoro ankavanana dia mila manoratra endrika iray ianao, araka ny takiana ao amin'ny D / s So ary manoratra ...
Ahoana ny fomba hahazoana tahiry fisotroan-dronono maty havana?
Ahoana ny fomba hahazoana ny tahiry fisotroan-dronono amin'ny havany efa maty? Ahoana ny fomba ahazoana ny fisotroan-dronono raim-pianakaviana maty amina fikambanana tsy mitady tombom-barotra tsy miankina amin'ny fanjakana tsy miankina amin'ny fanjakana fa ohatrinona no aloa amin'ny maty raha toa ka teraka tamin'ny 1974 ary maty tamin'ny 2012 ...
Inona avy ireo antony mety hanaisoa ny zon'ny reny?
Noho ny antony inona no ahafahana manala azy ireo ny zon'ny reny? Art. 69 SK RF - Ny ray aman-dreny / ny iray amin'izy ireo / dia mety tsy hanana ny zon'ny ray aman-dreny raha toa izy ka: manalavitra ny adidin'ny ray aman-dreny, anisan'izany ny rehefa ...
aorian'ny fahafatesan'ny iray amin'ireo mpivady izay mandova trano? vady aman-janaka. na vady voalohany, ary efa maty sahady
aorian'ny fahafatesan'ny mpivady iray, iza no mandova ny trano? vady, vady aman-janaka. na eo am-piandohan'ny vady, vady, ary aorian'ny fahafatesany dia efa zanaka ny zanaka, vady, ray aman-drenin'ny maty. Vady sy zanaka tafavoaka velona ...
Ahoana ny fomba hamaliana ny filazan'ny tenanao manokana?
Ahoana no fanomanana valiny amin'ny fanambarana ny tenanao? antsoina hoe famerenana ity. ... manorata amin'ny anaran'ny mpitsara izay misy ny raharaha, manondro ny mpitory, ny voampanga, ary avy eo dia apetraho ny ...
Azoko atao ve ny manova ny anarako farany amin'ny tovovavy iray taona aorian'ny fisaraham-panambadiana? ary inona ny antontan-taratasy ho aiza?
Azoko atao ve ny manova ny anarako amin'ny anaram-baviko herintaona taorian'ny fisaraham-panambadiana? ary miaraka amin'ny antontan-taratasy inona no ampiharina? Ianao dia afaka! Hanombohana azy, mifandraisa amin'ny biraon'ny rezistra, avy eo - amin'ny masoivohon'ny FMS an'ny Federasiona Rosiana ...
Inona ny antontan-taratasy ilaina amin'ny famonoana ny fitazonana?
Inona avy ireo antontan-taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana amin'ny maha-mpiambina azy? Betsaka. Mila mankany amin'ny mpiambina ianao ary any no hanomezana lisitra anao, omena fangatahana amin'ireo fikambanana sasany ary omena referansa handefasana med. Vonjeo. ...
Ohatrinona no andoavan'ny ray aman-dreny reny ny zanany? ... Vola sy tombony ho an'ny zaza nitaiza
Ohatrinona no andoavan'ny ray aman-dreny reny ny zanany? ... Isan'ny fandoavana sy tambin-karama ho an'ny zaza nitaiza Fandoavam-bola ho an'ny fikojakojana ny zaza nitaiza Isan'ny vola aloa isam-bolana ho an'ny sakafo, fividianana akanjo, kiraro, lamba malefaka ...
Rahoviana ny fisaraham-panambadiana dia ilaina mba hampihatra avy hatrany ny fizarana ny fananana? Ary afaka manao izany ianao aorian'ilay fisaraham-panambadiana? Hafiriana?
Tokony hanao fizarazarana trano eo noho eo ve ianao raha misy fisaraham-panambadiana? Azonao atao ve izany rehefa avy nisaraka? Maharitra hafiriana izany? Ny fe-potoana famerana ny fizarana fananana teo amin'ny ...
58 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 4,014.